418 kun oo Toban oo Asphalt ah Wadooyinka Izmir ee Maalmaha Corona | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 Izmir418 kun oo Toban Asphalt ah Wadooyinka Izmir ee Maalmaha Corona
20 / 05 / 2020 35 Izmir, Asphalt News, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Headline, TURKEY
kun oo tan oo asphalt ah waddooyinka Izmir maalmaha corona
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay dardar galisay cusboonaysiinta wadooyinka iyo shaqooyinka dayactirka inta lagu gudajiray maalmaha corona. Hawshan, kooxaha magaalooyinka waaweyn waxay dib u cusbooneysiinayaan wadooyinka magaalada iyagoo adeegsanaya qiyaastii 418 kun oo tan oo asphalt ah iyo 200 kun oo mitir murabac laba jibaaran oo walxaha qodista ah.
Qaab dhismeedka tallaabooyinka coronavirus, Degmada İzmir Magaala-weyne waxay dardar gelisay howlaha dayactirka iyo dayactirka ee wadooyinka, cufnaanta taas oo hoos u dhacday. Intii u dhaxaysey 1dii Maarso iyo 19kii Maajo, 200 mitir murabac oo laba jibbaaran ayaa lagu daboolay barxad iyo 418 kun oo tan oo aasaaska ah waxaa daadiyay DireZBETON kooxaha Agaasinka Guud.
4 575 dhibcood ayaa la fara galiyay
Kooxahan ayaa wax ka qabtay meelahan dhir gubatay oo ah 4 kun iyo 757 dhibcood oo magaalada oo dhan ah, gaar ahaan halbowlaha ugu weyn. Ka qodista kaabayaasha waxaa ku qornaa geedo dhan 79 594 mitir murabac. 55 meelood oo dhir iyo laamiyaasha ah ayaa wadar ahaan wadar ahaan ahaa 419 kun oo tan oo asphalt kulul ah.
200 oo mitir murabac ah oo daboolan barxada
Laga soo bilaabo bilowgii Maarso, shaqooyin ayaa sidoo kale laga qabtay waddooyinka laamiga ah iyo jidadka magaalada. Hawshan, 29 mashruuc ayaa la dhammaystiray. Shaqada 18 mashruuc ayaa socota. Dayactirka Parquet waxaa lagu sameeyay 19 koox waxaana qiyaastii 200 kun oo mitir murabac ah oo bannaanka ka mid ah la buuxiyay.
Ka hortagga ugu badan ee caafimaadka shaqaalaha iyo bulshada
Kooxuhu waxay sii wadaan shaqadooda in kasta oo cimilo diiran ay jirto, iyagoo fiiro gaar ah u leh masaafada nabdoon iyo xaaladaha nadaafadda ee qaybo badan oo magaalada ah. Kooxaha waxaa la siiyaa tababaro ay bixiyaan khabiiro amaanka shaqada ku takhasusay, dhakhaatiirta goobta shaqada iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka si ay uga difaacaan viruska. Ammaankooda darteed, taageerada qalabka ilaalinta ayaa la siiyaa iyadoon la carqaladeyn.
20 Thousand Ton Asphalt Waddooyinka Baagagga ah
23 kun oo mitir oo asfalt ah ayaa lagu dhejiyey Kartepe
Degmada Kayapinar waxay dhisi doontaa 70 kun tan oo ah asfalt
2 million 265 kun tan oo ah asfalt ayaa lagu dhigay Ankara
Kocasinan 25 si aad u hesho Kumanaan Tons of Asphalt
Çeşme iyo Özdereye 40 Thousand Ton Asfalt Deyr
Waxaan dalbaneynaa 3 kun tan oo ah asfalt laga bilaabo TPAO
Bartilmaameedka badda ee 250 Thousand Ton Asphalt